Igumbi loonondaba - Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni
FAKA ISICELO SONCEDO
Amabhaso kunye nokufezekiswa
Ungalufumana njani uncedo
Uqha ga mshelwano: Imibuzo yamajelo eendaba ifunyanwa phakathi evekini phakathi kwentsimbi yesi-8: 30 kusasa ukuya ku-5: 00 ngoMgqibelo:
UTom Massari Umphathi weNtengiso noNxibelelwano (815) 668-4425 [imeyile ikhuselwe]
Incwadana yokufikelela ngokulinganayo
Iindaba kunye namabali malunga nombutho wethu.
Incwadana yeendaba yangoNovemba ka-2021
Incwadana yeendaba ka-2021 ka-Epreli
Incwadana yeendaba yangoNovemba ka-2019
Indawo yoMlilo yango-2020
Indawo yoMlilo yango-2017
Indawo yoMlilo yango-2016
Umlilo wePrairie Idokethi yonyaka yamatyala aqaphelekayo kunye nokufezekisiweyo ngamagqwetha ethu ePrairie State Legal Services, Inc.
Ingxelo ye-2022 ye-Justice Gap
Iindaba zamva nje kunye namaNqaku
I-Legal Service Corp. inikezela ngeziphumo kwiimfuno ezisemthethweni zoluntu zaseMelika ezinemivuzo ephantsi.
Iinkonzo zoMthetho ze-Prairie State kunye no-State Lawmaker Banikezela ngamaThuba eSibini ngoNcedo lwezoMthetho lwasimahla
USenator kaRhulumente uSteve Stadelman (D-Rockford) wabamba iNgqungquthela yakhe ye-2022 Second Chances Summit ngoMeyi 20 kwiziko laseNordlof kwidolophu yaseRockford. Bangaphezu kwe-170 abantu abazimase iintlanganiso zomntu ngamnye kunye namagqwetha angamavolontiya ukuze bafumane uncedo lwezomthetho lwasimahla ekulungiseleleni amaxwebhu okucinywa okanye ukutywinwa kweerekhodi zolwaphulo-mthetho.
Iinkonzo zoMthetho zeLizwe lase-Prairie, Igqabi elitsha lase-Illinois Lazisa 'Cima iRekhodi Yakho' iPhulo leNtengiso
Iinkonzo zoMthetho zeLizwe lasePrairie kunye neNew Leaf Illinois zisungula iphulo elitsha lokuhamba kunye nentengiso yangaphandle ukonyusa ulwazi kunye namanani abantu abafaka izicelo zokucinywa kwe-cannabis kwiindawo zethu zenkonzo.
INkqubo ye-Internship yasehlotyeni yasePrairie State ibonelela ngaBafundi ngamava okwenyani ehlabathi
Ukusuka eBloomington ukuya eWaukegan, kunye neRock Island ukuya eKankakee, okokuqala, okwesibini, kunye nonyaka wesithathu abafundi bezomthetho-abasebenza njengePrairie State Legal Services (PSLS) interns-baya kuchitha ihlobo labo bentywilisela kwinkonzo yoluntu emangalisayo i-PSLS iyenzela abathengi bayo.
Umbono weMbali yeeNkonzo zoMthetho ze-Prairie State: Ukubhiyozela iminyaka eyi-45 yeNkonzo
NgoLwesibini, umhla wama-31 kuCanzibe yayilusuku olukhethekileyo: isikhumbuzo seminyaka engama-45 yePSLS! Kuninzi esikuphumezileyo kwisithuba seminyaka yethu yokuqala engama-45 kwaye sizibonakalise sithobekile kwaye sinobuchule bokusabela kwimingeni njengoko siye sahlala sizimisele kuthumo lwethu lokubonelela ngofikelelo olulinganayo kubulungisa nokujongana neengxaki zomthetho ezichaphazela iimfuno ezisisiseko zabaxumi.
Ukukhumbula uMlawuli oyiNtloko weSigqeba uJoseph A. Dailing
UJoseph (Joe) A. Dailing usweleke ngentsasa ye-9 kaJuni, eshiya ilifa elimangalisayo lokukhuthaza ukufikelela kubulungisa kumntu wonke. Wayeneminyaka engama-78.
zivalwe ii-Ofisi zePSLS – Usuku lweSikhumbuzo
Usuku lweSikhumbuzo lunika imbeko abo banikela ngobomi babo ngelixa bekhusela ubomi babanye kwihlabathi liphela. Ukubhiyozela uSuku lweSikhumbuzo, ii-ofisi zePSLS ziya kuvalwa ngoMvulo, nge-30 kaMeyi, 2022.
Usuku loMama oluvuyisayo kubo bonke oomama abamangalisayo abaPhandle!
Bhiyozela uSuku lukaMama wakho ngendlela elungileyo ngokwabelana ngolwazi malunga neenkonzo zeLeaf Illinois kunye nendlela esinokunceda ngayo ukucacisa iirekhodi ezifanelekileyo ze-cannabis.
Iinkonzo zoMthetho ze-Prairie State I-VISTA Iphela iminyaka emithathu yeNkonzo ngoMeyi 7
I-AmeriCorps isandula ukubhiyozela iveki yayo yokwamkelwa kwesizwe nge-13-19 kaMatshi. Ukuhlonipha inkqubo yethu ye-AmeriCorps-Volunteers in Service to America (VISTA), siyaziqhenya ngokugqamisa i-Community Outreach VISTA April Foster, oza kuphelisa iminyaka emithathu yenkonzo kunye neofisi ye-Peoria ye-Prairie State Legal Services namhlanje. Inkqubo ye-AmeriCorps-VISTA yeyesizwe...
Landela kwaye Yabelane Prairie State Legal Services' Social Networks
Ungalibali ukutyelela uFacebook, Instagram, Twitter, YouTube, kunye namaphepha eLinkedIn. Njengoko usazi, iinkampani kunye nabantu ngabanye kuyo yonke indawo baxhomekeke kwinethiwekhi yoluntu ngolwazi kunye nonxibelelwano.
Iinkonzo Zomthetho Zaseburhulumenteni
iiyure 13 eyadlulayo
Siyazingca ngokuba yinxalenye ye-Illinois Armed Forces Legal Legal Network (IL-AFLAN), ebonelela ngoncedo lwezomthetho ngaphandle kwentlawulo kumalungu afumana imivuzo ephantsi, amajoni, kunye neentsapho zawo. utyelelo bit.ly/3s0Fljf ukufunda okungakumbi malunga nenethiwekhi emnandi yemibutho.	... Bona OkuninziJonga ngaphantsi
Thetha kwiFacebook Thetha Twitter Yabelana kwi-In Yabelana nge-imeyile
FUMANA IOFISI YAKHO
Isitalato i303 esikuMantla esiPhezulu, iSuti 600
Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie azicaluli ekunikezeleni ngeenkonzo ngokobuhlanga, ibala, imvelaphi yesizwe, inkolo, isini, ukukhubazeka, ubudala, inkanuko yesini, isazisi sesini, okanye naluphi na uphawu olukhuselweyo ngumthetho.
Ifomu yeNkqubo yesikhalazo
Ifomu yesikhalazo socalucalulo